Indlela Yokukhohlisa Abathengi Ukuthenga okuqukethwe kwe-SEO-Friendly
Inamba enkulu yezinkampani zinombono wokuthi zingakhokha amapeneni okwenziwe kodwa ziyamangala, amabhulogi abo ahluleka ukuthandwa futhi ekugcineni, imikhiqizo ihluleka ukuthengisa. Inombolo yabalandeli babo bezokuxhumana bezenhlalakahle ihlala ephakeme, kodwa ukungenelela kwamakhamera abo wewebhu akuhlukumezi phambili.
Okuqukethwe kubalulekile, kodwa izinkampani zisaqaphela ukubaluleka kwayo. I-Max Bell, i- Semalt Umphathi Wempumelelo Yekhasimende, uchaza ukuthi kubaluleke ngani isayithi ukunikeza okuqukethwe okukhulu.
Uma ngabe i-platform yakho yewebhu inokuqukethwe okungalungile, abantu bazokwazi ukuthuthukisa umbono wokuthi umkhiqizo wakho awubi. Ngokwengqondo, umphumela we-halo uchaza ukuthi kungani abantu ababukeka bekhangayo bavame ukubizwa ngokuthi banokwethenjelwa. Lokhu kufaka ukuthi uma okuqukethwe kwakho kuhle, izethameli zizocabangela nokuthi umkhiqizo wakho ulungile.
Umphumela we-halo ubonakala uma abantu bekubona futhi uma okuqukethwe kwakho kujwayelekile, khona-ke akekho oyokubona. Ibhulogi intaba enkulu enkulu yokuqukethwe okujwayelekile, okungajabulisi kakhulu futhi okungabhalwanga kahle. Abalobi bakho ababizayo ngeke bakusize ukuthi unqobe izethameli zakho ngoba abantu bazokhetha amanye amasayithi anokuqukethwe okuhle..
Okuqukethwe okuphakathi kuzohluleka ukuthola izixhumanisi
Uma utshala kakhulu ekukhangiseni futhi uma abantu befinyelela kuwebhusayithi yakho, banqume ukuthi akuhambisani nabo, khona-ke ukutshalwa kwezimali akufanelekile. Ngokuqukethwe okuningi, uzokwazi ukuheha abathengi nabafundi isikhathi eside.
Okumangalisayo kunemilenze. Ukukhangisa akunakho
Kwezinye izimo, akuwona wonke okuqukethwe okukhulu okuyofezeka okuningi, kodwa okuningi okuqukethwe okuningi kusakazeka ngesikhatsi bese kuphelelwa ukwabelana kuwo wonke ama-social media nakwamanye amapulatifomu.
Okuqukethwe okukhulu kuhlobanisa umkhiqizo wakho ngobuntu obuthile
Ukubhala okubi akukuthinti, akukuthumisi, futhi akubandakanyi nawe. Eqinisweni, kungabizwa ngokuthi nje udoti lwezinki. Ngakolunye uhlangothi, okuqukethwe okuhle kungenza okuningi. Idala uxhumano, ubuntu, nokuzizwa. Uma kwenzeka udinga ukuthi okuqukethwe kwakho kube okupholile, kufanele uthole umuntu owazi izitayela zokuqukethwe.
Okuqukethwe okukhulu kuhlelwe kahle futhi kuphelele, into ebeka wena njengochwepheshe emkhakheni. Lokhu kuzodonsa abathonya abayizilaleli ezibucayi, futhi uma beqala ukushicilela okuqukethwe kwakho, ukufunda i-platform yakho, nokuxhuma kwamanye amasayithi, bese uvuna okuningi.
Okuqukethwe okubi akufanelekile ukutshalwa kwezimali
Ukucwaninga okungekho emthethweni nokubhaliwe akufanelekile imali oyisebenzisayo kuyo ngoba kuyohluleka ukugcizelela futhi ekugcineni, akukho izilaleli ezinkulu ezizokufunda. Okuqukethwe okuphezulu kuyoba kubi kakhulu, kodwa kunamandla okufinyelela izethameli ezinkulu futhi uhlele umkhiqizo wakho.